Ny faharefoana vaovao amin'ny tambajotra Wi-Fi dia misy fiatraikany amin'ny ankamaroan'ny fitaovana | Vaovao IPhone
Ny faharefoana vaovao amin'ny tambajotra Wi-Fi dia misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny fitaovana rehetra
Toni Cortés | 13/05/2021 20:00 | IPhone Security
Soa ihany androany, ny orinasan-telefaona dia manana tolo-tahiry lehibe ho an'ireo mpampiasa azy. Tsy lasa adala intsony izahay mitady bara wifi maimaim-poana, raha tsy hoe tsy maintsy mampiasa ny solosainao findainao na iPad ianao hiasa mandritra ny fotoana fohy rehefa manana kafe.
Fa raha izany no anao, ary misarika ianao Wifi ampahibemaso, tsy maintsy fantatrao fa mety ho voajirika ianao. Ny risika dia kely dia kely, saingy misy izy io, ary tsy maintsy fantatrao izany mba handraisana fepetra hisorohana ny olana.
Noho ny fifaninanana matanjaka eo amin'ny orinasa finday dia lafo vidy ny manana ankehitriny angona tsy voafetra na ampy ho an'ny sakafontsika isan'andro. Tsy mampiasa tambajotra Wi-Fi ampahibemaso intsony miaraka amin'ny iPhones intsony izahay, fa mamela azy ireo rehefa tsy maintsy miasa miaraka amin'ny anay iPads o MacBooks.
Ka tsy maintsy fantatsika fa manana ny tambajotra Wi-Fi ampahibemaso loza raha ny fiarovana no arosony ho antsika. Na dia tsy zavatra mahazatra aza izany dia tsy maintsy tadidintsika fa ny tambajotra Wi-Fi dia mora tohina, ary afaka miseho ny angon-tsaintsika.
Mpikaroka fiarovana iray manana rakitsoratra matanjaka amin'ny fahitana ny fahalemen'ny Wi-Fi dia nahita lesoka fiarovana vaovao amin'ny rafitra fifandraisana tsy misy tariby. Ny sasany amin'izy ireo dia ampahany amin'ny protokolovan'ny fiarovana ny fenitra wifi, izay no antony anatrehany azy ireo amin'ny fitaovana rehetra hatramin'ny 1997.
Ny "lavaka fiarovana»Azo hararaotina hangalarana angona tsiambaratelo, hifehezana ireo fitaovana an-trano an-trano ary handraisana solosaina sasany aza. Na izany aza, misy vaovao tsara roa. Voalohany indrindra, ny loza mety hitranga amin'ny tena mpampiasa dia kely dia kely. Faharoa, mora ny miaro tena manoloana ireo fandrahonana malefaka ireo.
1 Na ny protokol WPA3 aza marefo
2 Ny risika dia kely dia kely
Na ny protokol WPA3 aza marefo
Ireo "fitrandrahana" vaovao dia hitan'ny belza Mathy vanhoef, teknisiana fiarovana ny tambajotra. manazava amin'ny tranokalany fa misy lesoka fiarovana vaovao aza misy fiantraikany amin'ny tambajotra Wi-Fi Protokol WPA3, ilay heverina fa azo antoka indrindra.
Vanhoef manazava fa ny telo amin'ireo fahalemena hita dia lesoka famolavolana amin'ny fenitra Wi-Fi ary misy vokany amin'ny ankamaroan'ny fitaovana. Ho fanampin'izany, maro ny fahalemena hafa vokatry ny lesoka fandefasana fandaharana amin'ny fitaovan'ny Wi-Fi. Ny fanandramana dia manondro fa ny maodely Wi-Fi rehetra dia voan'ny fahalemena iray farafaharatsiny ary ny ankamaroan'ny fitaovana dia hita fa mijaly noho ny faharefoana maro miaraka.
Mariho fa ireo lesoka ara-piarovana ireo dia misy fiatraikany amin'ny protokolon'ny fiarovana maoderina amin'ny tambajotra Wi-Fi, ao anatin'izany ny famaritana farany WPA3. Na ny protokol fiarovana wifi tany am-boalohany aza, nantsoina WEP, voakasik'izany.
Ny risika dia kely dia kely
Soa ihany fa tsy taitra mihitsy i Vanhoef. Voalaza ao fa loza amin'ny fiainana tena izy ireo kelysatria miankina amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa sy ny fikirakirana ny tamba-jotra izy ireo. Mba hanafihana antsika dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny tambajotra Wi-Fi mitovy amintsika ny mpijirika.
Midika izany fa raha mifandray amin'ny Wi-Fi amin'ny seranam-piara-manidina ianao, dia olana izany, fa ao amin'ny bara iray misy olona dimy na folo, ny vintana iray mety ho mpijirika manam-pahaizana te-hanafika ny fitaovanao dia kely indrindra.
Azonao atao ny manatsara ny fiarovana anao amin'ny alàlan'ny fampiasana tranokala HTTPS isaky ny azo atao na mampiasa a VPN rehefa mifandray amin'ny toeram-bahoaka ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Ny faharefoana vaovao amin'ny tambajotra Wi-Fi dia misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny fitaovana rehetra
Misy izao Chipolo ONE Spot vaovao, mpifaninana amin'ny Apple AirTags
Ny iPad Pro voalohany miaraka amin'ny M1 eny an-dàlana ho an'ireo mpampiasa